Estoril Cascais SeaView 7Min Beach & Lisbon Train - I-Airbnb
UMaria ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
I-Estoril-iApartment enoMbono omhle ongaphambili woLwandle kunye nokukhanya kweLanga okuninzi.
Kuphela yi-7min yokuhamba ukuya elunxwemeni nakwisikhululo sikaloliwe eLisbon-Cascais
Ndiyayithanda indawo endihlala kuyo - ngokuqhelekileyo iyindawo yesiPhuthukezi - abantu badibana kwiivenkile zokutyela kunye neendawo zokutyela, bahambe neentsapho zabo ukuya elwandle ukuze bafumane ikofu emva kwesidlo sasemini.
Le ndlu isandula ukulungiswa kwakhona ukuze ifumane abahambi, abanqwenela ukuba kwindawo eqhelekileyo yamaPhuthukezi ngaselwandle, ukanti ukufutshane neendawo ezinesitayile zase-Estoril naseCascais.
Indlu idada kukukhanya kwelanga imini yonke, kwaye ngenxa yokuma kwayo, onke amacandelo anombono woLwandle oluhle.
... Ziyolise ngokuhlamba kwelanga okuphumlileyo esofeni ngexesha lasemini, okanye umangaliswe yimibala emihle yesundowns ngelixa usitya isidlo sangokuhlwa!
Uloliwe uya kukuthatha kwimizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 ukukhwela ngaselwandle ukuya kwiziko lembali laseLisbons.
I-Cascais inokufikelelwa ngokuhamba okumnandi ecaleni kwe-Sea Promenade kunye neeLwandle.
I-Sintra inokutyelelwa ngokulula, njengeSurf Spot Guincho eyaziwayo kunye nezinye iindawo ezininzi ezinomtsalane.
isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Le yindawo yokuzola yase-Estoril-Cascais, isiPhuthukezi kakhulu, ayikhenkethi, kwaye wamkelwa ngokufudumeleyo ngabantu balapha.
Ukuhamba ngemizuzu esi-7 ufikelela kunxweme olupholileyo lwabemi bethu, iPraia Azarujinha, enxibelelana ngokuthe ngqo kwezinye iilwandle ezifashisayo zase-Estoril, umzekelo iTamariz, kunye neCascais, ezolula iikhilomitha ezininzi - ke wonke umntu uya kufumana eyakhe okanye ayithandayo. indawo eselunxwemeni eneendawo zokutyela ezininzi, ukutya okutyiwayo kunye neendawo zokutyela kumgama wokuhamba.
Ipaki yeSkate epholileyo, umgangatho wamazwe ngamazwe, umgama nje ongama-200m
Izikolo ezininzi zeSurf kunye nePaddle
Ivenkile enkulu, iATM, iivenkile eziphambi kwesakhiwo.
Izimvo eziyi-1 010
Having grown up an international environment, with a German mother from Hamburg/Germany and a Portuguese father from Lisbon, and having worked for an airline and in tourism, I always liked very much to receive people at my home, to travel, to read, the beach, nature, and so many things more.
Please feel very welcome at mine and my friend's places and do not hesitate to contact me if you need further information about the listed places or about Portugal.
Ukuhlala kufutshane ndingakuvuyela ukunceda ngokukhawuleza xa kufuneka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Estoril